I-Jam | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Ngabe, kanjani nokuthi zingakanani ukondla izinkukhu ezifuywayo: ukudweba ukudla okunembile
Njenganoma yiziphi ezinye izilwane ezifuywayo, izinkukhu zidinga ukunakekelwa nokukhathalela ingxenye yomnikazi. Ngokukhethekile acutely bazizwa isidingo feed. Yiqiniso, ehlobo, lezi zinyoni zikwazi ukuzinakekela ngokwanele ukudla, uma zikhona isikhala esanele sokuhamba. Kodwa namanje, abakwazi ukuhambahamba emgwaqweni unyaka wonke futhi badle izinambuzane ezimweni zethu zezulu, ngakho sizozama ukubona ukuthi lezi zinyoni kufanele zondliwe kanjani futhi unyaka wonke.
Indlela yokupheka i-tangerine jam: isinyathelo ngesinyathelo zokupheka nezithombe
Akusiyo imfihlo ukuthi ama-tangerines ajwayele ukushiswa. Kodwa abesimame abaningi bafunda ukupheka i-jam yamanzi kulezi zithelo zase-citrus. Akukona nje kuphela okumnandi futhi okunomsoco, kodwa futhi kuyasiza ezinganeni nakubantu abadala. Ngokuthakazelisayo, ngokwenza ugwegwe, awukwazi ukusebenzisa kuphela inyama yesithelo ngokwayo, kodwa futhi usebenzise umqubu.
Feijoa jam: kanjani ukupheka, zokupheka, izinzuzo
I-Exotic feijoa berry isanda kuvela emashalofini ezitolo zethu. Futhi ukuthi lesi sithelo siyisiphuzo esiphundu hhayi nje kuphela esisha, kepha futhi njengesiphuzo esiphunga elimnandi, elibuye lizuzise kakhulu umzimba wethu. Ake sithole ukuthi ukubaluleka kwalo mkhiqizo kukuphi nokuthi kungcono kanjani ukuyipheka.
Indlela ukupheka jamu jamu nge lemon ebusika
Izihluthulelo ebusika seziyekile ukuba zibe yisidingo, kodwa bambalwa ukuthi inkosikazi isilungele ukwenqaba. Phela, ukudla okusemathinini okuhlala emanzini ngokuvamile kusiza ukuhlobisa ithebula noma ukuhlukanisa ukudla komndeni. Funda indlela yokupheka ujamu we-zucchini nge-add lemon - ukumangala abathandekayo ngamakhono akho okucubungula.
Indlela yokwenza i-jam kusuka ku-zucchini no-orange ebusika ekhaya
Bambalwa abantu abazi ukuthi okokuqala amaNdiya asendulo, ayehlala endaweni yaseMexico yanamuhla, aqala ukudla i-zucchini okokuqala. Namuhla, i-dessert ethandwa kakhulu i-jam jam, okuvame ukungezwa ku-orange noma ilamula. I-jam jam kulula kakhulu ukudidanisa nokudla okunaninosikazi.
Rose Jam: Three Recipes Ungadliwa
I-rose rose yamakha, ngaphezu kwephunga elimnandi nemithi yokwelapha, ingaba yinto enhle kakhulu eluhlaza okwesibhakabhaka nesiphundu esihlwabusayo. Kulesi sihloko sizobheka indlela yokuyilungisa kahle, futhi sifunde izindlela zokupheka eziyisisekelo. Izakhiwo ezizuzisayo ze-rose jam I-Rose jam iqukethe izinto eziningi ezizuzisa impilo yabantu.
Ama-oranges adonsela ngekhasi ekhaya
I-orange jam iyanda kakhulu ngonyaka. Uma kucatshangwa ukuthi sekudabukisayo, kodwa manje sekufake ngokuphepha ngokudla kwethu ngaphezu kwezinhlobo ezijwayelekile zalolu daba. Futhi nakanjani hhayi ngeze. Lesi simanga esiqhakazile nesimnandi sifanele ukupheka. Futhi ikhasi lizokwenza libe ligcwele kakhulu ngamavithamini namaminerali abalulekile.
Amathuluzi ayi-8 ongeke uwenze ngaphandle kwasekhishini
Indlela yokutshala nokukhula ukhukhamba "Aquarius"
Sikhula eziyishumi ezweni
I-Bark yama-orchid: izibonelo zokulungiselela nokusetshenziswa kwamacala
Indlela yokwenza isigaba se-cearean inkomo
Okufanelekile emapulazini amakhulu - Izinkukhu Super Harko
Ukwelashwa okuyinhloko kwezinkomo kufihla ekhaya
Ukupheka okulula ukulungiselela iklabishi eqoshiwe ku-Korean nasezithombeni zezithombe